Isaia 54:1-17 "1 Mihobia, ry momba, hianao izay tsy niteraka, eny, velomy ny hoby, ka manandrata feo, hianao izay tsy mba nihetsi-jaza; fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro noho ny zanaky ny manambady, hoy Jehovah. 2 Halalaho ny itoeran’ny lainao, ary aoka hohenjanina ny ambain-dainao, ka aza avela hisy hiketrona; halavao ny kofehinao, ary aoreno mafy ny tsima-dainao; 3 Fa hitatra any amin’ny ankavanana sy any amin’ny ankavia hianao, ary ny taranakao hahazo ny jentilisa, ka dia hasiany mponina ny tanàna lao. 4 Aza matahotra, fa tsy ho menatra hianao; ary aza mangaihay, fa tsy havela ho afa-baraka hianao; fa ho hadinonao ny henatry ny fahatanoranao, ary tsy ho tsaroanao intsony ny tondromasonao fony mpitondratena. 5 Fa ny Mpanao anao no Vadinao, Jehovah, Tompon’ny maro, no anarany; Ary ny Iray Masin’ny Isiraely no Mpanavotra anao, Andriamanitry ny tany rehetra no anarany. 6 Fa Jehovah efa nampody anao, izay tahaka ny vady efa nafoy ka ory am-panahy, ary tahaka ny vady efa novadina hatry ny fony mbola tanora, fa efa napetraka, hoy Andriamanitrao. 7 Indray mipi-maso monja no nahafoizako anao; fa amin’ny indrafo lehibe kosa no ampodiako anao. 8 Tamin’ny firehetan’ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mipi-maso monja, fa amin’ny famindrampo mandrakizay kosa no amindrako fo aminao, hoy Jehovah, Mpanavotra anao. 9 Fa amiko izany dia tahaka ilay ranon’i Noa, ka toy ny nianianako fa tsy hanafotra ny tany intsony ilay ranon’i Noa. Dia toy izany no ianianako fa tsy ho tezitra aminao na hiteny mafy anao intsony Aho. 10 Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra, ary na dia hihetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindrampoko, ary tsy hitsoaka ny faneken’ny fihavanako, hoy Jehovah, Mpamindra fo aminao. 11 Hianao, ry ory izay afotofoton’ny tafiodrivotra sady tsy manana fampiononana, indro, Izaho handatsaka ny vatonao amin’ny antimony sy hanorina ny fanambaninao amin’ny safira, 12 Hataoko robina ny tilikambo madinikao, sy karbonkolo ny vavahadinao, ary vato soa ny fari-taninao manodidina. 13 Ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianarin’i Jehovah, ka dia ho be ny fiadanan’ny zanakao. 14 Amin’ny fahamarinana no hampiorenana anao; aza manahy ny fampahoriana, fa tsy hatahotra hianao, na ny fampahatahorana, fa tsy hanakaiky anao izany. 15 Na dia misy miara-mioko aza, dia tsy avy amiko izany; ary na iza na iza miara-mioko hamely anao dia ho tonga hiandany aminao kosa. 16 Indro, Izaho no nahary ny mpanefy izay mifofotra ny afo amin’ny arina ka mahavita fiasana hanaovany ny asany; Ary Izaho koa no nahary ny mpandringana mba handringana. 17 Ny fiadiana rehetra izay voaforona hamelezana anao dia tsy hisy hambinina, ary ny lela rehetra izay miady aminao dia horesenao lahatra. Izany no lovan’ny mpanompon’i Jehovah sy fahamarinany avy amiko, hoy Jehovah."
Sarin’ny vehivavy momba no handraisana an’i Jerosalema eto: atao tsinontsinona, tsy manan-taranaka… rehefa raisina tokoa ny zava-nisy ho an’ny Israely, dia tena izany no niainany; babo sady sesi-tany any Babylona vokatry ny tsy fankatoavana an’Andriamanitra. Toa tsisy fanantenana fa mikombona ao anatin’ny henatra. Sarin’ny zanaka adala ihany koa izany (Lioka 15) izay nilomano tao anatin’ny filibàna tamin’ny endrika samihafa. Fa moa tsy toetrantsika ihany koa ve io? Olona miaina ao anatin’ny fahantràna ara-panahy, rehefa tafasaraka amin’ Andriamanitra, ka miezaka miarina amin’ny herin’ny tenany araka izay mba azony atao. Sata vaovao. Fanarenana arahina fiainana vaovao no ampanantenain’i Jehovah ho an’Israely: Inona avy no hanehoan’ Andriamanitra izany? Fitomboan’ny taranaka amin’ny fomba tsy takatry ny saina, hany ka ny lay fitoerana aza dia tsy maintsy halalahina (2-3). Fanarenana ny tantaram-piainana rehetra nolalovana tany amin’ny fahatanoràna (4-5). Fitobahan’ny famindrampo sy fahasoavan’Andriamanitra (7-8): tsy azo ampitahaina akory ny fahatezerana nihatra tany aloha sy ny velaran’ny fitiavan’ny Tompo hampiverenany an’Israely ankehitriny. Jereo fa mihatra hatramin’ny taranaka mandimby ny fitahiana: “ho be ny fiadanan’ny zanakao” (13). Tsy Israely tany aloha ihany anefa no hiharan’ny Teny fampanantenana, fa isika zanak’Andriamanitra ankehitriny koa, satria “lovan’ny mpanompon’i Jehovah izany” (17).
Tambitamby. N’inon’inona ady mafy atrehiko sy ny fakam-panahy mianjady dia azoko ho raisina ho ahy koa ny Teny feno fitiavana sy tambitamby ambaran’ny Tompo hoe “na dia hifindra aza ny tendrombohitra…tsy mba hiala aminao ny famindrampoko” (10).